Akụkọ - Uwe nwoke! Ụdị okporo ámá!
Ọ dị oke n'oge ịkọ ụdị usoro nchịkọta uwe ụmụ nwoke nke 2022 - na ụdị okporo ụzọ - ga-ebupụta, mana ọ bụghị ihe gbatịa iche n'echiche na ọ nwere ike ịmalite ebe ọ kwụsịrị n'oge ọrịa tupu ọrịa. Uwe uwe nwoke nke 2020 nke oge opupu ihe ubi na-egosi ihe dịka June 2019 hụrụ okporo ụzọ ime obodo na-arịgharị na mkpali, site na ngosipụta na agba na-egbuke egbuke ruo na ụda dara ada na silhouette ahaziri ahazi.
Na London, ọ bụ ihe niile gbasara ịkwa akwa uwe elu ahaziri maka ụbọchị oyi; na Milan, na-eji akwụkwọ ndị nwere obi ike na-egwu egwu; na na Paris, na-anabata sleek, monochrome anya.
Ka anyị soro dị ka usoro si na akwa uwe nwoke 2022 na-egosi.
Anyị mere gị omenala na ejiji ụmụ nwoke na-eyi mkpụmkpụ, uwe ogologo ọkpa, hoodie & sweatshirts, t-shirts, ect.
Na-atụ anya atụmatụ gị pụrụ iche pụtara na ọha.
Oge nzipu: Jun-12-2021